चीनसँग तल परेर सहयोग माग्न आवश्यक नै छैन
चीनसँग तल परेर सहयोग माग्न आवश्यक नै छैन अरुण सुवेदी
जनतापाटी बुधवार, भदौ २५, २०७६, १९:३७:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं । तीनदिने नेपाल भ्रमण सकेर चीनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी स्वदेश फर्किएका छन् ।
नेपाल भ्रमणको दौरानवाङ नेतृत्वको टोलीले तीन वटा सम्झौता गर्‍यो । सम्झौताअनुसार चीनले मनाङमा अस्पताल बनाउने, चीनियाँ भाषा अध्ययनका लागि स्वयमंसेवक शिक्षक नेपाल पठाउने र पाँचहजार टेण्ट सहयोग गर्ने रहेको छ ।
केरुङ–काठमाडौं रेल सेवा सञ्चालन तथा चीनबाट सञ्चालित परियोजनाका बिषयमा छलफल भएपनि कुनै ठोस बिषय बाहिर आउन सकेन ।
अस्पताल बनाउन ३५ करोड सहयोग लिएको, टेष्ट मागेको र भाषा पढाउने शिक्षक मागेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा सम्झौताको विरोध भइरहेको छ ।
चीनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण र भएका सम्झौताका बिषयमा विदेश मामिलाका जानकार अरुण कुमार सुवेदीसँग कुराकानी गरेको छौँ ।
चीनियाँ विदेशमन्त्री र नेपालबीच भएका सम्झौतालाई कसरी लिने ?
सरकारले निकै खराब सम्झौता गर्यो भन्ने लागेको छ । सरकारले यस्ता सम्झौता गर्न आवश्यक नै छैन । अरु उद्योगहरु छन् ।अन्य पुर्वाधारका क्षेत्र छन् ।
सरकारलाई यस्तो झिनामसिना सहयोग लिनुपर्ने बाध्यता बुझ्न सकेको छैन । त्रिपाल जस्ता साना सहयोगका लागि उद्योग वाणिज्य महासंघ अनुरोध गरेको भएहुन्थ्यो । नेपाल त एउटा राष्ट्र हो । चीन जस्तो शक्तिशाली राष्ट्रसंग तल परेर सहयोग माग्न आवश्यक नै छैन ।
भ्रमणमा बीआरआई तथा काठमाडौं-केरुङ रेलमार्ग लगायतका गम्भिर बिषयमा छलफलको आश गरिएको थियो । तर त्रिपाल, अस्पताल जस्ता साना बिषयमा सम्झौताहरु भए । यसले कस्तो सन्देश दिन्छ ?
विदेशमन्त्री स्तरीय भ्रमणमा भएको सहयोगले नेपालको बेइज्जत भएको छ । चीनसंग यस प्रकारको सहयोग माग्ने काम गर्नु हुदैन थियो । चीनले नै दिएको भएपनि उसले अत्यन्त गिरेर र तल्लो स्तरको ठानेर सार्वजनीक बेईजत गरेर दिएको भन्ने लाग्छ ।
राज्यले भनेको हो भने, फुटपातको कुरा भन्यो । चीनले भनेको हो भने, चरम बेईज्जतको कुरा गरेको हो । यसले हाम्रो सम्बन्ध एकदमै तल्लो स्तरमा र अविश्वासको स्तरमा पुगेको छ भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
तर चीनले ठुलो परियोजनाको प्रस्ताव गर्न नेपालसंग आग्रह गर्दै आएको छ । ठुला परियोजनामा किन सम्झौता बन्न सकेको छैन ?
यो राज्यको नालायकीपन हो । यसले हाम्रो विदेश सम्बन्ध र विदेश मन्त्रालयको चरम नालायकीपन देखिन्छ ।
कहिलेकाँहि नेपाल र चीन सम्बन्धमा समस्या देखिने गर्छन् । चीनियाँ राष्ट्र प्रमुखको आसन्न भ्रमणले यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ ?
नेपाल र चीनबीच विश्वसनीय सम्बन्ध छ । यो बुझ्न गाह्रो छैन । चीनले नेपालमा आफु विरोधी गतिविधि नहोस भनेर हरेक प्रयत्न गरेको देखिन्छ । सीजिङपिङ बनारसको भ्रमणपछि नेपालमा केही घण्टा आउने खबर छ ।
भ्रमणजति छोटो भएपनि चीनका राष्ट्रपति नेपाल आउनु सकारात्मक कुरा हो । यसमा दुवै देश सकारात्मक हुनुपर्छ । चीनको कारणले नेपालसंगको सम्बन्ध प्रभावित हुनु हुदैँन ।
नेपालमा एक चीन नीतिप्रति कहिलेकाँही प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यसले दुई देशबीचको सम्बन्धमा कस्तो अविश्वास सिर्जना गर्ला ?
राजनीतिक तह वा सरकारी तहमा यसको विषयमा कुनै कुरा उठेको छैन । त्यसैले अविश्वास बढेको हो भन्ने कुरा मान्न म तयार छैन । तर जुन प्रतिवद्धता एक चीन नीतिमा व्यक्त गरेका छौँ । त्यस अनुसारको परिस्थिति नेपालमा निर्माण भएको छैन । नेपाल छिमेकीभन्दा अमेरिका र युरोपेली युनियनसंग नीतिगत रुपमा बढी आश्रित छ । यसप्रति चीन सजक हुन्छ ।
भारतीय विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण लगत्तै चीनियाँ विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण भएको छ । यसलाई कसरी लिन सकिन्छ ?
यो विषयमा धेरैले चीनले काउण्टर दिएको भन्न सक्छन् । तर जयशंकरको भ्रमणको काउण्टरको रुपमा चीनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणलाई लिनुहुन्न ।
चीनबाट तेल र रेल ल्याउने कुरा कत्तिको सम्भव छ ?
रेलको कुरा जहाँसम्म छ, त्यो लामो छ । चीनबाट नेपाल रेल ल्याउनुपर्छ भन्ने पहिलो पात्रमै हो जस्तो लाग्छ । जहाँसम्म तेलको कुरा छ । जुन सामान चीनले तिब्बतमा आपूर्ती गर्छ, त्यसको मूल्य भारत र अफ्रिकाभन्दा बढी हुन जान्छ ।
केरालाबाहेक तिब्बतका नाकाहरु सबै ५ हजार मिटरभन्दा बढी उचाईका छन् । यो तुरुन्त हुने विषय होइन् । यो कुरा गर्‍यो भने चीनले हामीलाई मुर्ख सम्झिन्छ ।
नक्सालबाट गोदावरी लगेर बालिका बलात्कार बिहिवार, भदौ ७, २०७५, ०७:१६:००
सेनालाई साधनसम्पन्न र प्रविधि मैत्री बनाउनुपर्ने बुधवार, आश्विन १, २०७६, १९:०७:००
आज ऋषि पञ्चमी, हरेक नारीले बुझ्नैपर्ने यथार्थ ! रजस्वला भएका बेलामा अरुलाई छोइछाई गर्दा महिलाको शरीरबाट निस्कने विकृत रजका कीटाणुले नराम्रा रोग निम्त्याउने र त्यसले गर्दा महिलालाई नै पाप लाग्ने भएकाले छुन नहुने र जानी नजानी छोइछाई भएमा आजको दिनमा अरुन्धतीसहित सप्त ऋषिको पूजा गर्नाले त्यस पापबाट मुक्त भइने धार्मिक विश्वास रहेको छ । मंगलवार, भदौ १७, २०७६, १८:०५:००